Xildhibaan sahro cumar Maalin oo shegtay in ay u laabanayso Ururada Bulshada rayadka.
Xildhibaan sahro cumar Maalin oo ka mi ah Xidhibaanada golaha shacabka soomaliya oo maanta ka hor hadlaysay xildhibaanada Golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiraan Magacyo xun oo Bulshadu ay ka fahmeen mudnaanta Golaha shacabka JFS.
Waxa ay ugu baaqday xildhibaanada Golaha shacabka somaliya in ay ka dhii dhiyaan wax kasta oo ku kenaya sumcad dil.
‘ Sidoo kale waxay eedeen culus ujeedisay shaqaalaha Baarlamaanka soomaaliya oo ay ku eedeeysay in ay masuul ka yihiin wax kasta oo ka dhaca golaha dhax-diisa.
Hadalka Xildhibaan Sahra ayaa imaanaya xilli Golaha Baarlamaanka dhaxdiisa Firimbi laga yeeriyay Maalintii sabtida aheed ee Madaxweyne Farmaajo uu furi lahaa Kalfadhiga 7aad ee Golaha shacabka JFS.
Xildhibaan Sahro Cumar Maalin ’’Fadeexada Baarlamaanka Lagu haayo iyo Magacyada badan ee bulshadu noo bixinayso hadii ay sii socdaan waxaan ku laabanayaa Ururada Bulshada rayadka oo aan ka Tirsanaa ,.
Posted by Somaliweyn Media on Wednesday, June 10, 2020
« Somaliland oo shaacisay kiisas Cusub.
Kulan looga hadlay wax ka bedelka Sharciga Axsaabta oo muqdisho ka dhacay. »